”Kenya waxaan siinaynaa dabbaabaad casri ah oo ay haystaan 2 dal oo qura!” – Turkiga + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Kenya waxaan siinaynaa dabbaabaad casri ah oo ay haystaan 2 dal oo...
”Kenya waxaan siinaynaa dabbaabaad casri ah oo ay haystaan 2 dal oo qura!” – Turkiga + Sawirro
(Ankara) 05 Juun 2021 – Turkiga ayaa hadda xaqiijiyey war horay usoo baxayey oo sheegayey inay dabbaabaad casri ah siinayaan Ciidamada Kenya, kuwaasoo tiro ahaan gaaraya 118 gaari oo nooca gaashaaman ah.
“Gawaarideenna taayarrada taatikaysan leh ee 4×4 oo afarta taayarba ka dhaqaaqa ee lagu magacaabo Hızır oo Afrika oo idil laga amaanay ayaa haatan kusii faafaya suuqyada qaaradda,” ayuu yiri Furkan Katmerci, ayuu yiri Guddoomiye Xigeenka Katmerciler oo Anadolu Agency (AA) inay gaadiid aan horay abid loo arag ay kusoo bandhigayaan Carwada Caalamiga ah ee Gaashaandhigga (IDEF) oo Istanbul lagu qabanayo Agoosto.
Katmerci ayaa sheegay in Kenya ay noqon doonto dalkii 3-aad ee caalamka ka iibsada gaadiidkan gaashaaman, isagoo xaqiijiyey inay hubkan oo dhamaystiran ay Kenya ku wareejin doonaan muddo 2 sanadood ah.
Hızır oo gebi ahaanba Turki samee ah waxay cududdiisu dhan tahay 400 oo faras, isagoo taag u leh inuu u gigsado miinooyin dhuleedka, awood uu ku nuugo ruxanka jugaha culus ee ku dhaca iyo walxaha qarxa ee macmalka ah, isagoo leh dhowraarin baalistig ah.
Katmerciler ayaa samaysay gaarigan 4×4 ee Hızır.
Katmerciler ayaa dunida ilaa haatan u dhoofisey 989 oo gaadiidkan ah sanadkan oo qura, iyadoo uu Afhayeenka KDF, Zipporah Kioko, ay Jannaayo horay u sheegtay inay hubkan kula dirirayaan kooxda Al Shabaab ee Somalia, iyadoo xustay inay Turkigu tartan furan uga guulaysteen shirkado ka kala dhisan South Africa Woqooyiga Ameerika.
Warqaadka The Star ayaa horay u qoray in gaadiidkani uu ku kici doono Sh7.7 bilyan oo shilin, iyadoo gaadiidka noocan ah ee ay haatan Kenya haysataa ay kala yihiin Puma M26-15, WMZ 551BSI, Mamba MK5, Bastion iyo CS/VP 14, kuwaasoo ciidanka la siiyey min 2010 ilaa 2019, waxaana la wada geeyey Somalia, balse bandhigooda looma bogin.
Previous articleHalka laga keeney Turkey iyo meesha hadda loo wado Sacuudi Carabiya (Warbixin xog-warran ah)
Next articleLiiska hordhaca ah ee ciyaartooyda Xulka Qaranka Somalia ee gudaha & dalalka ay kuwa kale ka imanayaan (Dalka ay la dheelayaan)